आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? यी क्षेत्रका बासिन्दाले उच्च सतर्कता अपनाउनुहोस् « News24 : Premium News Channel
आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? यी क्षेत्रका बासिन्दाले उच्च सतर्कता अपनाउनुहोस्
काठमाडौँ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेकोले वर्षा भइरहेको छ । यस वर्ष मनसुनी वर्षाको सुरुआतमै अत्यधिक पानी पर्दा देशका विभिन्न भागमा बाढी तथा पहिरोको प्रकोप बढेको छ ।
आज (बिहीबार) देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही विभिन्न ठाउँमा वर्षा र भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । अहिले प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरुमा वर्षा भईरहेको छ ।
आज दिउँसो र रातिसम्मै पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने महाशाखाको भनाइ छ । देशका अधिकांश स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने सुदुरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश १ का केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्टयाङ्गसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी जारी गर्दै महाशाखाले प्रदेश १, बागमाती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको केही भूभागमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेकोले जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताइएको छ । खासगरी ती प्रदेशहरुको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, नदीनाला तथा खहरे खोलाहरुमा पानीको सतह बढ्न सक्ने र बाढी चल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । साथै बाढी पहिरोका कारण यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
महाशाखाले बिहीबार पश्चिम राप्ती, तिनाउ र बबईमा बहाव बढेर उच्च जोखिम हुन सक्ने जनाएकाे छ भने नारायणी, कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा मध्यम जोखिम रहेकाे बताएकाे छ । यसैगरी कन्काई, कमला, बागमती, कोशी र यसका सहायक नदीमा पनि मध्यम जोखिम रहेकाे छ ।